Maalinta: Ogast 27, 2019
Kulamada Izmir iyo Istanbul ee Carwada, Hasret wuu dhamaaday
6-15 Marti Sharafta ugu dambeysay ee thezmir International Fair (İEF), oo loo qaban doono munaasabadda 88 inta u dhexeysa Sebtember, ayaa lagu dhawaaqay. Magaalada Istanbul, oo ah dalka ay iskaashadaan dadka Jamhuuriyadda Shiinaha, Jamhuuriyadda Hindiya ayaa diiradda u saareysa carwadda iyada oo la adeegsanayo Kahramanmaraş'la Honor [More ...]
Hilal Bandırma Line Elektaroonigga Natiijada Udirka Qandaraaska
Hilal Bandlalrma Line Km: 70 + 355'den Nif Bridge iyo Km: 73 + 315'den Gediz buundada wadada saxda ah kadib dayactirkii la taaban lahaa ee la xoojiyay ka dib shaqada aasaasida xarumo koronto [More ...]
Hagaajinta isku socodka inta udhaxeysa Divrigi iyo Kayseri
Agaasinka Gobolka TCDD 4 Hagaajinta buundooyinka u dhexeeya Divrigi iyo Kayseri waxaa lagu abaalmariyey hindisada. Qiimaha ku dhawaad ​​ee Agaasinka wax soo iibsiga Gobolka (TCDD) oo leh 4 / 2019 GCC waa 275427 TL [More ...]
Ankara 30 Agoosto Gaadiidka Dadweynaha oo Bilaash ah
Ankara 30-kii Agoosto Gaadiidka Dadweynaha oo Bilaash ah: Taliyaha Guud ee Dawladaha Hoose ee Magaalada Gaasa Mustafa Kemal ayaa u dabaaldegay xuska sannad-guuradii 97-aad ee Weerarkii Weynaa. Degmadda Ankara ee Magaalo Weyne "Agoosto 30 Guul [More ...]
Gulf Gaadiidka iyo Stadler Waxaa jiray heshiis ay u tareen First Turkey ee Hybrid
Qeybta Tüpraş ee gaadiidka tareenka, Körfez Transportation waxay heshiis la saxiixatay Stadler, oo ah soo saaraha Gaadiidka tareenka ee Switzerland, oo loogu talagay toddobo aag oo isku nooc ah nooca EUR gabatar. ay ka mid yihiin heshiiskii dayactirka siddeed sannadood, Stadler Turkey [More ...]
Gaadiidka TCDD Inc. Agaasinka guud ee dambiilayaasha hore, naafada ah iyo shaqaalaha mashiinada ayaa loo qaadi doonaa natiijooyinka codsiyada goobta shaqada lagu dhawaaqay. U Guji Natiijooyinka Codsiyada Musharixiinta Musharraxiinta Musharraxiinta U Shaqeeya Codsadayaasha Naafada ah [More ...]
jiilka koowaad ee cusub Turkey ayaa soo saaray TÜDEMSAŞ in Sivas baabuurta xamuulka qaran laga rabey. Turkey ee baabuurta horeeyay ee xamuulka ee mitir cusub jiilka dheer la weelasha vagonluk 29,5 2 hal baabuur ah [More ...]
7, Transanatolia Rally, oo ka mid ah dibad-baxyada ugu caansan adduunka oo loo yaqaan diyaarinta horudhaca ee Dakkar Rally. Dhamaadka maalinta ayaa ku dhameyn doonta Sanliurfa. Dibad-baxayaashu waxay aadi doonaan Göbeklitepe iyadoo dhamaadka ay martigelin doonaan Dawladda Hoose ee Magaaladda. [More ...]
'Takoorka togan ee haweenka ee gaadiidka' Codsiga Eskişehir wuxuu helayaa mahadcelin
Eskişehir degmada Metropolitan, kuwaasoo dib ugu sano 2016 gaari kale ugu horeysay ee Warbxinnadaa codsiga Turkey 'Gaadiidka Women Positive Takoorka' aad ayay ugu qanacsan by haweenka. Arjiga, haweenku waxay rabaan inay sugaan waqtiyada qaarkood iyagoon joojin [More ...]
Laga bilaabo Ankara Metropolitan ilaa Anitkabir
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay hawlgal qabyo leh ka qaadatay Anıtkabir, oo ah goobta nasashada weligeed ah ee Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Waaxda Dawlada Hoose ee Magaalada ee Arimaha Sayniska 7 / 24 ka shaqeysa asphalt kadib dayactirka wadooyinka iyo shaqada dayactirka [More ...]
Gobolka wuu bixin kari waayey Wadada Waqooyiga Marmara! Wadada weyn ma xiran doontaa?
Agaasinka Guud ee Wadooyinka Waaweyn kama bixin karin la wareegitaanka dhulka ee Çatalca, kaas oo laga qaatay Waqooyiga Marmara iyo Wadooyinka isku xidha. Mulkiileyaasha guryuhu waxay xaq u leeyihiin inay dacweeyaan wadada. Mashruuca wuxuu ku kacayaa 14 bilyan 555 milyan [More ...]
Isgoyska Bülent Ecevit wuxuu si hagaagsan u socdaa
Dowladda Hoose ee Manisa iyo maalgashiga 63 milyan ginni ee magaalada Salihli iyo 1. Dhismaha wadooyinka isku xirka dhinacyada ayaa si habsami leh uga socda howlaha Salihli Bülent Ecevit Köprülü Junction halkaas oo masraxa laga adeegto. Studies [More ...]
Mersin Metro ma lagu dari doonaa Barnaamijka Maalgashiga ee Dowladda?
Lütfi Elvan, gudoomiyaha guddiga qorsheynta iyo miisaaniyada baarlamaanka iyo kuxigeenka Mersin, wuxuu ku dhawaaqay inuu la kulmi doono madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan si loogu daro barnaamijka maalgashiga Mersin Metro. Dhibaatooyinka Mersin bilowgii dhibaatada taraafikada [More ...]